Okumele kwenziwe wumndeni ngokuhlehla komsebenzi wamadlozi - Ilanga News
Home Izindaba Okumele kwenziwe wumndeni ngokuhlehla komsebenzi wamadlozi
Okumele kwenziwe wumndeni ngokuhlehla komsebenzi wamadlozi
ISAZI sezamasiko, uMnu Sazi Mhlongo, sithi imindeni ebikade isiluphimisile usuku lokwenza imicimbi, kumele ishise impepho emsamo, ibikele abadala abangasekho ngokuhlehla kwemisebenzi.
“Amadlozi aphethe thina, nathi siphethe wona. Ngakho kumele babikelwe abangasekho ukuthi ngenxa yesimo esibi esenzeka emhlabeni, kuyaphoqa ukuba kumiswe yonke into.
“Siyazi ukuthi umshado kawuhlehli noma ngabe kushoniwe, kodwa lesi simo sithinta umhlaba wonke, kumele kulalelwe imithetho yezwe,” kusho uMnu Mhlongo.
NoMbhishobhi Zakhele Khwela, weReformed St John’s Apostolic Faith Mission, (eChibini), okuyibandla lama-Krestu eligqugquzela nokuhla-tshelwa kwabangasekho, uhambe emazwini kaMnu Mhlongo.
Uthe ubamba inkukhu emhlophe egcekeni noma uyithenge, uyoshweleza ngayo emsamo noma ezimbili uma bewuzokwenza umsebenzi wenkomo.
“Uxolisa ngenkukhu emhlophe bese uyayinquma idliwe wumndeni ukwehlisa ulaka lwabaphansi. Kuyingozi ukungashwelezi ngoba abapha-nsi bayadinwa uma kungasenzeki abakuthenjisiwe, okungadala umonakalo emndenini, kwesinye isikhathi kuphume nesidumbu,” kusho uMbhishobhi uKhwela ophethe isekethe laleli bandla eMthwalume.
Previous articlekunconywa olokufundisa u-matric emsakazweni
Next articleamaphoyisa eTheku akhala ngokuhlushwa ‘amaphara’